XOG: Muudeey & Maxamed Mursal oo weyn kara Booskooda Xildhibaanimo (Sababta) - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon XOG: Muudeey & Maxamed Mursal oo weyn kara Booskooda Xildhibaanimo (Sababta)
XOG: Muudeey & Maxamed Mursal oo weyn kara Booskooda Xildhibaanimo (Sababta)
Iyadoo marxalada doorashada dalka uu galay meelaha qaarna ay ka bilowdeen soo doorashada Xildhibaanada aqalka sare ayaa dhanka kale waxaa socda olole ballaaran.
Muqdisho,oo ah Caasimada dalka ahna meesha ay Dawlada Federaalka ku shaqeyso xarumaha beesha caalamkana ku yaallaan ayaa ah meel mashquul badan ka jirin.
Magaalooyinka Baydhabo & Kismaayo ayaa doorashada iyo howlaheeda aad loo dareemay iyadoo kulamo badan ay halkaasi ku leeyihiin siyaasiyiinta xildoonka ah iyo odayaasha dhaqanka beelaha.
C/weli Ibraahim Muudeey oo ah Gudoomiye kuxigeenka koobaad Ee Golaha Shacabka ayaa warar la helay waxay sheegayaan in uu wajahayo cadaadis ah in laga reebo sanadkaan booska Xildhibaanimada.
Lama oga in Villa Soomaaliya ay tani gadaal ka riixeyso iyo in kale balse wararka ayaa sheegaya in qudhiisa Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo ah Afhayeenka Golaha Shacabka uusan rajo 100% ah heysan soo laabashada kursiga.
Doorashada Soomaaliya sanadkaan oo aad uxiiso iyo xamaasad badnaan doonta ayaa isha lagu wada hayaa sida ay wax unoqdaan waxaana madaxda Dawlad Gobolleedyada badankood ay taageero umuujin karaan Madaxweyne farmaajo.
Muudeey iyo Maxamed Mursal oo Nabad iyo nolol ah ayaan la garaneynin waxa xilligaan ay dareemaan culeyska siyaasadeed oo booskooda ay wal wal kaga qabaan.
Ilo wareed lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegaya in doorashada bilaabatay Aqalka sare Mucaaradka iyo Muxaafadka ay kala heystaan hal iyo hal kadib markii Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay Aqalka sare xubnaha lasoo gudbiyey midna Nabad iyo nolol looga farxiyey midna lagu dhabar jebiyey.